Wixii aaraadeyda ah waan muujiyaa | Vaikuttajan reittikartta
Wixii aaraadeyda ah waan muujiyaa
Waa laguu ogol yahay in aad tiraahdo wixii fekradaada ah ee arrimaha haddii urur aad ku jirto ama haddii aad ku jirto ururka middowga ardayda ama ururo noocaas oo kaleba. Haddii aad heyso aaraahyo kaa sood u maleyneyso in ay caddaha oo aad dooneysid in xisaabta lagu darsado goorta go’aamo muhiim ah la gaarayo, waxaad si toos ah aad ula xiriiri kartaa Xubnaha Baarlamaanka ama ama Guddiyada Dawladda Hoose. Qof kasta wuxuu xaq uleeyahay in aaraadiisa la wadaago.
Codka go’aanka gaareysa ee doorashooyinka lagu doortey badanaaba jawaab-celis ku filan kama helaan muwaadiniinta kasoo wargelinaya sida go’aamada ay gaaraan ay u saameyso nolosha dadka. Sidoo kale is badel ayaad sameyn kartaa inta u dhaxeyso waqtiga doorashooyinka!
Siyaabo kale ee loo muujiyo aaraahdaada waa adiga oo wixii dhalleeceyn ah ee arrimaha ku quseeya ku qora (blog) gaaga ama wargeysyada magaaladaada. Koorsto qoraal oo online-ah ayaa waxaa bixiya Xarunta Luqadda ee Jaamacadda Jyväskylä (Jyväskylän yliopiston Kielikompassi) waxay ku siinaysaa talo ah sida loo qoro dhaleeceyn wanaagsan. Adiga oo internetka codkaaga ka dhiibanaya ayaa ah qaab kale oo aaraahdaada aad ku muujin karto. Waa jira bogga internet, sida www.adressit.com, halkaasoo aad ka baran karto mowduucyada laga hadlayo – ama mid bilow adiga!